Covid-19: Miitatra hatrany amin'ny Laboratoires HJRA
lundi, 29 juin 2020 16:52
Tamin'ny herinandro lasa teo dia nakatona mihitsy ny Bloc Operatoire n'ny Hopitaly HJRA noho ny valanaretina Covid-19 nahazo ireo mpiasa tsy ampy fitaovana fiarovana.
Re ihany koa izao fa niitatra hatrany amin'ny Laboratoires ny aretina Covid-19, ka hatreto dia miisa 8 ireo mpiasa voamarina fa mitondra ny tsimokaretina Covid-19.
Misy ireo ao amin'ny Labo manao ny test Covid-19, ny labo Anatomie pathologies, ny labo immunologie, ny labo bactériologie, ary ny ekipa Manao biomol, misy ihany koa mpiasa ao amin'ny banque de sang.
Ny Interne qualifiant ao amin'ny Labo HJRA ihany koa no mbola mandeha miasa any Androhibe LA2M, reraka ireo mpiasa sy mpianatra ho dokotera, sady miasa alina no miasa mafy, nefa tsy mahazo indemnité, zara raha mahazo fitaovana fiarovana.
Mihena ampitoerana ireo miasa satria misy ireo marary.
Misy service maromaro moa ao anatin'ny Département laboratoire: biochimie, microbiologie, immunologie, hématologie , Anatomie pathologies et cytologie et biologie Moléculaire .
Ankoatran'ny Labo Biomol dia ireo mpiasan'ny labo hafa dia tsy mahazo na masque avy amin'ny hopitaly aza, tsy misy fizarana masque ho an'ny rehetra, fa ny service hématologie ihany no manana masque ny mpiasa.
Nisokatra tsy tapaka ny laboratoire tao aorian'ny nahalalana fa nisy mpiasa voa tao, tsy natao laharam-pahamehana ny fanaovana test ireo mpiasa rehetra, fa ny sasany ihany aloha no natao. Ny sasany mbola niandry.
Nisy olona voa anefa tamin'ireo tsy vita test ireo, rehefa nivaly taty aoriana ny tests.
Tsy natao haingana, tsy natao laharam-pahamehana, fa hoe "Nareo angaha marary e"
Mitaky ny mpiasa ny hanaovana désinfection ny banque de sang, mitaky fitaovana fiarovana ireo mpiasa, ary mahatsiaro reraka tsy misy andro tsy hiasana, nefa tsy misy na indemnité aza.